प्रधान्यायाधीशको पिएसओ बनेर दियोपोस्टलाई धम्की दिने मिरा खड्काको पिएसओ भएकाे खुलासा (अडियोसहित) – Digital Khabar
१९ चैत्त, काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्र शम्शेर जबराको पिएसओ हुँ भन्दै दियोपोस्ट डटकमका प्रधानसम्पादक सुदीप विश्वकर्मालाई हत्कडी लगाउने धम्की दिने व्यक्तिको तस्विर फेला परेको छ ।
भिडियाे स्राेतः दियाेपाेष्टबाट साभार
समाचार नलेख्न भन्दै धम्की दिने व्यक्ति सर्वोच्च अदालतकै तेस्रो बरियतामा रहेकी बरिष्ठ न्यायाधीश मिरा खड्काको पिएसओ असई बुद्धि बहादुर स्याङतेन रहेको पाइएको छ । आफूलाई जबराको पिएसओ बताउने ललितपुरको कोन्ज्योसोम गाउँपालिका ४ नल्लु घर भएका बुद्धि स्याङ्तान जबराको पिएसओ भने नभएको पाइएको हो ।
‘तपाईंलाई कसले भन्यो । यहाँ सबै जनाले होइन भनिरहेका छन् । ल जग्गाधनीसँग फोन गर्नुस्’ भन्दै उनले प्रधानन्यायाधीशका पिएसओ बताउने स्याङ्तानलाई फोन दिएका थिए । ‘म नल्लुको बासिन्दा हुँ । म यो जग्गाको धनी हुँ । तपाईंलाई मिडियामा खबर दिने को मान्छे हो ? त्यो भन्नुपर्यो । मिडियाले जे पायो त्यही छाप्न पाइन्छ ? यो के मिडिया हो ? तपाईंले मलाई चिन्नु हुन्छ होला । मेरो परिचय तपाईंलाई बताउनु पर्यो,’ स्याङ्तानले धम्की दिँदै भनेका थिए,‘तपाईंलाई म हत्कडी लिएर आउँ भोली ? तपाईंले जे पायो त्यही छाप्न पाइन्छ ? म पुलिस हो । म प्रधानन्यायाधीशको पिएसओ हो । भोली म हतकडी लिएर आउँछु ।
तपाईंको ठेगाना कहाँ हो ?’
‘हामी यता मिलाउने कोशिस गर्दा गर्दै समाचार छाप्न पाइँदैन,’ स्याङ्तानले भने,‘समाचार कसले दियो भनिदिनुस् ।’ स्राेतः दियाेपाेष्टबाट साभार
अटो रिक्सामा मुक्तिनाथ विकास बैंकको क्युआर सेवा